इटहरीमा श्रीमान-श्रीमती एकै ठाउँमा मृ`त अवस्थामा फेला ! – Purba Aawaj
इटहरीमा श्रीमान-श्रीमती एकै ठाउँमा मृ`त अवस्थामा फेला !
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ समय: १३:३८:३१
इटहरी / सुनसरीकाे इटहरीमा श्रीमान श्रीमती मृ`त फेला परेका छन् । इटहरी २० तरहराकाे एक पैनीमा श्रीमान श्रीमती एकैठाउँ मृ`त फे`ला परेका हुन् ।
उदयपुरको रौता गाउँपालिका ३ घर भएका उनीहरु हाल इटहरी २० मा बस्दै आएका थिए । मृ`त्यू हुनेमा हेमशेर राई र उनकी श्रीमती शर्मिला राई रहेका छन् । माछा मा`र्ने क्रममा करे`न्ट लागेका उनीहरुकाे मृ`त्यु भएकाे स्थानियले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् , सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापाले मन्त्रालयको लक्ष्य तथा योजना सफल पार्नेगरी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखसँग आज सम्पन्न छलफलमा उनले नयाँ बजेटमा घो,षणा भएअनुरुप मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई प्र,भावकारी ढ,ङ्गले सम्पादन हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनिन् ।
कर्मचारीलाई प,रिणा,म आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, “कति ध्यान दिएर काम गरेँ भन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो कामबाट सबैभन्दा पहिले आफू सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुहोस् ।”
मन्त्री थापाले पहिलेको राम्रा कार्यक्रमलाई निर`न्तरता दिइने तथा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी आफूले गृ,हकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । अहिलेको सूचनाप्रविधिको यु,गअनुरुप नेपालले यस क्षेत्रमा फ`ड्को मा`र्न आवश्यक रहेकामा उनले जो`ड दिइन् ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, महाशाखाका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका काम तथा आगामी कार्यक्रमसम्बन्धी वि`स्तृत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । पोस्ट पत्रीका बाट
Last Updated on: June 12th, 2021 at 1:38 pm
१२५८ पटक हेरिएको